Soo -saareyaasha Alaabada, Alaab -qeybiyeyaasha - Warshadaha Alaabada Shiinaha
Daaweynta saxarood biyo ka hortagga saddex barar. Lakabka: Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo salpingitis sida yolk peritonitis, ukun qolof ciid ah, ukun dhiig-ilaali ah, ukun qolof jilicsan, iwm. Isticmaalka: Broiler: 500ml mi ...
Beerka iyo beeryaraha Prefect Waxyaabaha ugu waaweyn: Bakteeriyada, Forsythia, Platycodon, Chuanmu Tong, Atractylodes, Bupleurum, Cohosh, Peel Green, Taneline Peel, Eupatorium, Nepeta, Parsnip, Bengal, Angelica, Morning Glory, iwm. dhiig -bax, dhiig -bax unugyo iyo xubno kala duwan, dabada oo hoos u dhacda, cuntada oo yaraata, indhaha oo daata, saxaro dheg -dheg ah, iwm.
Daaweynta gastritis -ga qanjidhada
Daaweynta gastritis-ka qanjirada qanjirada Calaamadaha qoorta: 1. Caloosha qanjirada ee digaagga jiran ayaa barara sida globular-ka iyo caanaha caanaha, muuqaalka kore ee cirridka oo kale ayaa la arki karaa marka si taxaddar leh loo fiiriyo; Jeexitaanku wuxuu muujinayaa dhumucda iyo bararka derbiga caloosha ee qanjirada, acupressure ayaa ka soo bixi kara dareeraha serous, s ...